बट्टाईको अण्डा खाँदा हुने फाईदाहरु - Mitho Khabar
January 27, 2020 mithokhabarLeaveaComment on बट्टाईको अण्डा खाँदा हुने फाईदाहरु
१२ माघ २०७६, आईतवार काठमाडौं । अण्डालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ । धेरैजसो पन्छीको अण्डा खाइने भए पनि संसारभर धेरैले खाने अण्डाचाहिँ कुखुराकै हो । यसबाहेक हाँस, बट्टाई, अष्ट्रिच आदिका अण्डा पनि धेरैले रुचि पूर्वक खाने गरेका छन् । वन्य पन्छीहरू ढुकुर, कालिज तथा तित्राका अण्डा पनि निकै रुचाइन्छ । ती सबैका अण्डामा केही फरक विशेषता हुने भए पनि सामान्यत सबैमा एकै प्रकारको गुण पाउन सकिन्छ ।अण्डा खाँदा हुने फाइदा र बेफाइदाको बारेमा पनि हामीलाई धेरैले बताउने गर्छन् । तर के तपाईलाई थाहा छ स्वस्थ शरीरका लागि दिनमा कतिवटा अण्डा खानु उचित हुन्छ ? अनि यसलाई कसरी पकाउनु पर्छ ? स्वास्थ्य वि’शेषज्ञहरू शरीरलाई स्वस्थ राख्न दैनिक अण्डा सेवन गर्न सल्लाह दिने गर्छन् । साथै आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा अण्डाको सेवन गर्नाले स्वास्थ्यमा हुनसक्ने हा’निको बारेमा पनि बताउँछन् ।पोषणतत्वले भरिपूर्ण भएकै कारण चिकित्सकहरू दिनमा एउटा अण्डा खाने सल्लाह दिने गर्छन् ।
अण्डामा भिटामिन ए, डी, बी तथा बी १२, लूटीन तथा जी’एजेनथीन लगायतका तत्व पाइन्छ । यी तत्व आँखाका लागि निकै फा’इदाजनक मानिन्छ ।अण्डा किन्दा कहिल्यै पनि फु’टेको अण्डा किन्नु हुँदैन । यसमा माटो वा व्या’क्टेरिया छि’र्ने ख’तरा हुन्छ । त्यसैले, अण्डालाई फ्रिजमा छोपेर राख्न विज्ञहरू सल्लाह दिने गर्छन् । अण्डाको सेतो भागलाई बट्टामा बन्द गरेर तीन हप्तासम्म फ्रिजमा राख्न सकिन्छ । अण्डाको भित्री पहेँलो भागलाई भने तीन दिनसम्म मात्र सु’रक्षित राख्न सकिन्छ ।अण्डा ताजा छ कि छैन भन्ने कुरा विभिन्न तरिकाले पत्ता लगायत सकिन्छ । एउटा भाँडोमा चिसो पानी लिएर त्यसमा अण्डालाई हाल्दा पनि यो कुरा पत्ता लाग्छ । अण्डालाई चिसो पानीमा हाल्दा अण्डा डु’बेमा त्यो ताजा हो भने न’डुबेमा बासी हो । यसमा पनि अहिले बजारमा पाइने बट्टाईको अण्डामा अन्य पंक्षीको अण्डामा भन्दा धेरै पौष्टिक आहार पाइने गरेको छ ।
दुखेको घुँडालाई ठीक बनाउन कागतीलाई यसरि प्रयोग ग’र्नुहोस्